साथीहरूसँग घडी 45
भक्तिमा वृद्धि को लागी के आवश्यक छ?
कसरी सेवा गर्ने भनेर सोच्दै उहाँलाई समर्पित छ, र यसको लागि काम गर्दै।
भक्ति एक सिद्धान्त, कारण, अस्तित्व वा व्यक्ति, र एक समर्पित छ कि को लागी केहि क्षमता मा कार्य गर्न तत्परता तिर एक राज्य वा दिमाग को फ्रेम हो। भक्ति मा वृद्धि एक गर्न को क्षमता, सेवा गर्न मा निर्भर गर्दछ, र क्षमता बुद्धिमत्ता संग काम गरेर बढाइएको छ। भक्ति प्रकृतिले आफ्नो भक्तिलाई अभिव्यक्त गर्न केहि गरेर आफ्नो भक्ति देखाउन प्रेरित गर्दछ। भक्ति को यो आवेग सधैं सबै भन्दा राम्रो परिणाम उत्पादन गर्दैन, यद्यपि, अभिप्राय को सबै भन्दा राम्रो को लागी, के गरियो यो केको गरीएको छ को हानि हुन सक्छ।
भक्ति स्वभावहरू हृदयबाट कार्य गर्दछ। मुटुबाट यो कार्य, यो सहि सुरुवात हो, वास्तविक विकास को लागी पर्याप्त छैन। ज्ञान कार्य गर्न आवश्यक छ। एक भक्ति प्रकृति संग एक मानिस अभिनय अघि सामान्यतया सुन्न गर्दैन, तर आफ्नो मुटुको आदेश वा आवेग अनुसरण गर्न रुचाउँछ। यद्यपि, दिमागको व्यायामले मात्र ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। कसैको भक्तिको वास्तविक परीक्षा भनेको अध्ययन गर्नु, सोच्न, उसको भलाइको लागि मनलाई काम गर्नु हो जुन उहाँप्रति समर्पित छ। यदि कोही भावनात्मक कार्यमा फर्कन्छ र धैर्यता र लगनशीलताका साथ सोच्न असफल हुन्छ भने ऊसँग साँचो भक्ति हुँदैन। यदि भक्तिपूर्ण प्रकृति भएको व्यक्तिले आफ्नो दिमाग प्रयोग गरिरह्यो र स्पष्टसँग सोच्ने शक्ति प्राप्त गर्‍यो भने उसले ज्ञानलाई उसको भक्तिमा थप्नेछ र उसले समर्पित भएको सेवा गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ।
धूपको स्वरूप के हो र यो प्रयोगमा कति लामो भइसक्यो?
धूपको प्रकृति पृथ्वीको हो। पृथ्वी, चार तत्व मध्ये एक को रूप, गन्ध को भावना संग मेल खान्छ। धूप गम, मसला, तेल, रेजिन, काठको सुगन्धित मिश्रण हो जुन जलाउँदा यसको धूँवाबाट रमाइलो गन्ध आउँछ।
मानिसहरूले संस्था, चलन, र घटनाहरू रेकर्ड गर्न सुरु गर्नु अघि धूप प्रयोगमा थियो। थुप्रै शास्त्रपदहरूले उपासनाको क्रममा धूपको कुरा गरेको छ। धूप बलिदानहरूमा र बलिदानको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, भक्त र उपासकले आराधना गर्ने भक्तिको प्रमाण। धेरै धर्मशास्त्रहरूमा धूप बाल्नुलाई पूजाको भाग भनेर वर्णन गरिएको छ र धूप प्रयोग गर्ने नियम, यसको तयारी र दाउरा दिने नियमहरू पनि छन्।
के कुनै फाइदाहरू धूप बाल्नेबाट प्राप्त हुन्छन्, ध्यानको दौरान?
शारीरिक र सूक्ष्म संसारहरूको बारेमा ध्यान गर्दा ध्यान धूप बाल्नेबाट लाभ उठाउन सकिन्छ। धूप बाल्नु सूक्ष्म वा साइकिक संसार भन्दा टाढा पुग्दैन। धूप बाल्नुले मानसिक वा आध्यात्मिक संसारका विषयहरूमा मनन गर्न मद्दत गर्दैन।
यदि कसैले पृथ्वीको थोरै आत्मा र कम पृथ्वीको आत्मा, वा सूक्ष्म संसारका कुनै पनि प्राणीमा निष्ठा दिन्छ भने उसले धूप बाल्नेबाट फाइदा लिन सक्छ। उसले दिईएको बेनिफिटका लागि बेनिफिटहरू पाउँछ। पृथ्वीले शारीरिक मानिसलाई पोषण दिन खाना दिन्छ। यसको सारले पृथ्वीका जीवहरू र सूक्ष्म संसारका प्राणीहरूलाई पनि पोषण दिन्छ। धूप जलाउने कार्यले दोहोरो उद्देश्य पूरा गर्दछ। यो आकर्षण र इच्छित प्राणीहरु संग संचार स्थापित गर्दछ, र यसले अन्य जीवहरुलाई धपाउन को लागी अयोग्य छ। यदि कोहीले केही प्रभावहरूको उपस्थिति चाहान्छ भने धूप बाल्नुले यी प्रभावहरू आकर्षित गर्न र तालमेल स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि यदि कसैलाई उसले प्रयोग गर्ने धूपको प्रकृति थाहा छैन र उसले चाहेको प्रभाव वा कस्तो प्रकारको प्रकृतिलाई थाहा पाउँदैन भने उसले लाभको सट्टा लाभ लिन सक्छ जुन अवांछनीय र हानिकारक हुन्छ। यो शारीरिक र सूक्ष्म वा मानसिक संसारको बारेमा ध्यान गर्न, र कामुक वस्तुहरूमा लागू हुन्छ।
मानसिक र आध्यात्मिक संसारका विषयहरूमा गहन ध्यानका लागि, धूप बाल्नु आवश्यक पर्दैन। एक्लो विचार र दिमागको मनोभावले निर्णय गर्दछ कि प्रभाव वरिपरि कस्तो हुन्छ र के मानिस र मानसिक र आध्यात्मिक ध्यानमा सहभागी हुन्छन्। धूप जलेर प्रायः दिमागलाई संवेदनशील वस्तुमा समाहित गर्दछ र मानसिक र आध्यात्मिक संसारको बारेमा ध्यान गर्न आवश्यक अमूर्त स्थितिमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ।
के धूप जलाउने कार्यहरू कुनै पनि विमानमा अवलोकन गर्न सकिन्छ?
उनीहरु। अपरेटरको शक्तिमा निर्भर गर्दै तिनीसँग सम्बन्धित विषयको जानकारी, दृश्य र अन्य संवेदनशील प्रभावहरू स्पष्ट हुनेछन्। धूपबाट उत्पन्न धुवाँ र धुवाँले शक्ति र भौतिक शरीर प्रदान गर्दछ जसमा प्राणीहरूले चाहेको र आह्वान गरिरहेको हुन सक्छ। यो एउटा कारण हो कि जादूगर र नेक्रोमैन्सरहरूले उनीहरूको आह्वान र कन्ज्युरेसनमा धूप प्रयोग गर्थे। धूप जलाउने द्वारा शारीरिक भन्दा अन्य विमानहरुमा उत्पादन हुन्छन्, तर एक आफ्नो मानसिक इन्द्रियहरु प्रशिक्षित र आफ्नो दिमाग को नियन्त्रण मा यो देख्न को लागी हुनु पर्छ। तब उसले कसरी हेरे र जान्न सक्छन् कि किन प्रभाव र प्राणीहरू धूप बाल्ने कामले आकर्षित हुन्छन् वा दिक्क हुन्छन्, तिनीहरूले धूप दिनेलाई कसरी असर गर्छन्, र अन्य परिणाम धूप बाल्ने काममा सहभागी हुन्छन्।